सुहाग-रातमा बेहुलीको महिना-वारी सुरु भयो!श्रीमान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो? |
सुहाग-रातमा बेहुलीको महिना-वारी सुरु भयो!श्रीमान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो?
October 20, 2021 adminLeaveaComment on सुहाग-रातमा बेहुलीको महिना-वारी सुरु भयो!श्रीमान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो?
महिला अधिकारका कुरा गर्दा धेरै देशहरु अझै पछि नै छन् । यस्तै एक समाचार इजिप्टको छ, जहाँ एक महिलाको कथा सुन्दा जिउ काँ प्छ । त्यहाँ एक पुरुषले बिहे गरे । तर जब सुहाग-रातको समय भयो, दुलहीको महिना-वारी सुरु भयो । त्यसपछि उनी सह-वासका लागि राजि भइनन् । रिसाएका उनका पतिले उनलाई कु ट पी ट गरे र क र णी गरे । यसले नयाँ दुलहीको मनो भावनामा गहिरो चोट पुग्यो।
हालै इजिप्टमा एक टिभी कार्यक्रममा देखाइएको यस्तै एक दृश्य पछि धेरै महिलाहरूले उनीहरूसँग भएका आफ्ना नराम्रो अनुभवहरू सोशल मिडियामा साझा गरिरहेका छन् । ती पोष्टहरू मध्ये एउटी महिलाले भनिन् कि उनका लोग्ने धेरै अद्भुत व्यक्ति थिए तर जब उनी गर्भ-वती भइन् उनले नराम्रो व्यवहार गरे जसको कारण उनको जीवन पूर्णरूपमा परिवर्तन भयो।
उसको पोष्टमा यो लेखिएको थियो कि ‘पतिको ब्य त्त्वि त राम्रो थियो । जब हामी विवाह गरेको एक बर्ष भयो, त्यस समयमा म गर्भ-वती भएँ र म डेलि-भर गर्न लागेकी थिएँ । यति बेला मेरा पतिले मलाई स जा य दिने निर्णय गरे । उनले स जा य स्वरुप मलाई कु ट पी ट गरे अनि ममाथि क र णी गरे । यसले गर्दा मेरो गर्भ-पात भयो । लामो कानुनी झ न् झ ट पछि मेरो पतिसँग स म्ब न्ध-वि च्छे द भयो र उहाँबाट अलग भएँ तर अहिले पनि मेरो बच्चा गु मा उ ने पी डा मेरो दिमागमा छ ।
राष्ट्रिय महिला काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार इजिप्टमा प्रत्येक वर्ष औसत ६५०० वटा घटना भएको पाइन्छ जसमा पतिहरूले वैवाहिक अवस्थामै उ त्पी ड न गरेका छन् । त्यहाँ स्थापित महिला केन्द्रका एक वकिल र कार्यकारी निर्देशकले बीबीसीसँग कुराकानीमा भनेका छन् कि इजिप्टमा एउटा सामान्य संस्कृति रहेको छ, जसको अनुसार एक महिला पतिका लागि २४ घण्टा नै सह-वासका लागि तयार रहनु पर्छ ।
भारत,पाकिस्तान लाइ पछी पार्दै एक नम्बरमा नेपाली सेना।विश्वमा गर्वान्वित तुल्याउने यस्तो आयो खुसीको खबर।
१८ दिनदेखि बे’प’त्ता विना सापकोटाकाे घट’ना थप रह’स्यमय बन्दै।बाहिरियो नसोचेको सत्यता
BREAKING:काठमान्डू उपत्यकालाइ खुशीको खबर,कोरोना सम्बन्धी यो खबरले केही राहत ल्यायो,पुरा पढ्नुहोस